အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးနှင့်အတူ,ကွဲပြားခြားနားသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသည်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာအမျိုးမျိုးလိုအပ်သည်။, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နှာခေါင်း ဦး စားပေးမှုကိုအသုံးမပြုပါ. ခွေးတွေရဲ့အနံ့ကပိုများတယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ် 40 အနံ့လူ့အသိထက်အဆ, သူတို့ကအနံ့အမျိုးမျိုးရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအနံ့များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်. လူသားတို့သည်ရနံ့၏အရနံ့ကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်. ဒါပေမဲ့ခွေးတွေကမတူကြဘူး. ခွေးများသည်အသားအရသာနှင့်ကမာ၏အနံ့ကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်.
ယခုလူတို့၏သဘောထားအမြင်အပေါ် အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်သည့်ခွေးအစားအစာထုတ်လုပ်သူများပေါ်လာသည် ,သူတို့ကခွေးအစားအစာလုပ်နို့အရသာသို့မဟုတ်အခြား flavors.but ထားကခွေးရဲ့သှေးဆောငျအတှကျအကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါဘူး. ထို့ကြောင့်, ခွေးများ၏အာဟာရအလွန်ထိခိုက်သည်, နှင့်ခွေးလျော့နည်းအစာစားခြင်း.
ဒီစျေးကွက်ဝယ်လိုအားအပေါ်အခြေခံပါတယ်, ဗစ်တာလုံးတပ်စက်သည်ခွေးစာစက်အမျိုးမျိုးကိုတီထွင်ခဲ့သည်. ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်မှု demoan အရ, ခွေး extruder စက်ကိုလည်းကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ configurations အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်. ခွေးအစားအစာစက်ထိုကဲ့သို့သောအပူချိန်နှင့်အစိုဓာတ်ကိုအဖြစ်ဖြစ်စဉ်ကို parameters တွေကိုအားဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်ထုတ်ကုန်ပုံသဏ္inာန်အတွက်ကုန်ပစ္စည်းထူးခြားတဲ့စေရန်, အရသာအတွက်ထူးခြားတဲ့, ကြွယ်ဝသောအာဟာရနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သော texture. ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဘို့အသင့်လျော်သည်’ အရသာ. ခွေးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိုခွေးများထုတ်လုပ်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, ကြောင်, ငါး, ပုစွန်, မြေခွေးနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အမျိုးမျိုး , ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်သူအမျိုးမျိုးအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်.
3. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပါ’ အစာခြေခြင်းနှင့်အစားအစာများ၏စုပ်ယူမှုနှုန်း
5. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာအမျိုးမျိုး၏အာဟာရညွှန်းကိန်းများပါ ၀ င်မှုပြောင်းလဲပါ, ကဲ့သို့: အစားအစာများ၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အစိုဓာတ်ကိုလျှော့ချပါ, အရာသိုလှောင်မှုမှအကျိုးရှိသောဖြစ်ပါတယ်
6. အစားအစာအမြောက်အများကိုပြောင်းပါ, အစားအစာ၏အမြောက်အများသိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်ဖို့ granulation ညှစ်ညှစ်
7. အမျိုးမျိုးသောဘက်တီးရီးယားကိုသတ်, salmonella နှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောတ္ထုများ, အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာဘေးကင်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ